Imisebenzi Yezokuhumusha yaseNingizimu Afrika
Imisebenzi yethu yezokuhumusha ibandakanya amafomu okuvuma unolwazi kuya kumaphephandaba angaphakathi, izinhlelokusebenza (ama-app) kanye namawebhusayithi. Imibhalo yakho ihlinzekwa ngendlela ecacile neqondakala kalula ngazo zonke izilimi zaseNingizimu Afrika eziyi-11.
Xhumana nathi uphethe imininingwane yomsebenzi wakho »
Siyakwamukela enkampanini yaseNingizimu Afrika yezokuhumusha eqondene nemikhakha yezobuchwepheshe obunhlobonhlobo. Sizibophezele ekuhumusheni imibhalo eqondene nezamabhizinisi, nezomthetho kanye nezokwelapha ifundeke sengathi beyivele ibhalwe ngezilimi zaseNingizimu Afrika eziyi-11: isiZulu, isiXhosa, Afrikaans, Sesotho sa Leboa (Sepedi), Setswana, Sesotho, Xitsonga, Siswati, Tshivenḓa kanye nesiNdebele. Sihlinzeka nangemisebenzi yokuhumushela ezilimini zabalingani abakhulu beNingizimu Afrika kwezohwebo ezinjenge-Portuguese, Kiswahili kanye ne-Chinese Mandarin. Sinesiqiniseko sokuthi yonke imisebenzi yethu yokuhumusha iyahambisana nemigomo yamazwe ngamazwe yezokuhumusha okuqondene nemikhakha yezobuchwepheshe.
Bheka izingaqophelo lemisebenzi yethu ehumushiwe. Amakhasi ahumushiwe aqukethe okufana ncamashi nokusekhasini lesiNgisi. Imisebenzi yethu ehumushiwe iyatholakala futhi ayinawo amaphutha okubhalwa kwamagama.
Vakashela iwebhusayithi yethu nganoma oluphi ulimi lwaseNingizimu Afrika:
Izingaqophelo: Siyahlaba esikhonkosini zibekwa
Siqasha abahumushi abawongoti kuphela. Uma kuhumushwa umbhalo wezomthetho, sisebenzisana nomhumushi oneziqu futhi owaluncela ebeleni ulimi asebenza ngalo. Asimuqashi umuntu oneziqu zemfundo ezingatholakalanga enyuvesi eqinisekisiwe yaseNingizimu Afrika. Phezu kwalokho, bonke abahumushi bethu banesipiliyoni esinzulu seminyaka engengaphansi kweyi-10. Uma udinga ukuthi sikuhlinzeke ngama-CV neziqu zabahumushi bethu singakunika, futhi siyowasayina nama-SLA aqinisekisa izingaqophelo labahumushi bethu.
Ukubhekwa kwamaphutha okubhalwa kwamagama nge-MS Word
Imibhalo yakho ehumushiwe idluliswa kuzo zonke izigaba zokuhlela umsebenzi njengoba wenza nawe embhalweni wesiNgisi. Sisebenzisa amakhompyutha ukuqinisekisa ukuthi imibhalo yakho ayinawo amaphutha okubhalwa kwamagama, isebenzisa ulimi oluvumelekile futhi ihunyushwa ngendlela ehambisanayo. Singakujabulela ukukukhombisa.
Ibhizinisi eligculisayo lithembela kulokho okungaqinisekiswa. Isisekelo saleli bhizinisi wukwanelisa izidingo zamaklayenti ethu njalo. Asisoze sazibophezela esikhathini esiwumnqamula-juqu umhumushi wethu angeke akwazi ukusifeza.
Sithumelele umbhalo wakho, usho isikhathi esiwumnqamula-juqu osinqumile kanye nezilimi zakho. Isikhathi sokuphundula isicelo sesilinganisomali sakho asizukudlula emizuzwini emihlanu ngezikhathi zomsebenzi.
Izilimi ezikhulunywa ezifundazweni zaseNingizimu Afrika
Province (%) SA% GP KZN WC EC MP LP FS NC NW
IsiZulu 23% 20 78 1 24 1 4 1 3
IsiXhosa 16% 7 3 25 79 1 8 5 6
Afrikaans 14% 12 2 50 11 7 3 13 54 9
English 10% 13 13 20 6 3 2 3 3 4
Sepedi 9% 11 9 53 2
Setswana 8% 9 1 2 2 5 33 63
Sesotho 8% 12 1 1 3 4 2 64 1 6
Xitsonga 5% 7 10 17 4
Siswati 3% 1 28 1
Tshivenḓa 2% 2 17 1
IsiNdebele 2% 3 1 10 2 1 1
Data Statistics South Africa: Census in brief (2011).PDF
Ulwazi olubanzi, olubandakanya ukwahlukahlukana ngokwezilimi, lwabo bonke omasipala abakhulu kanye namadolobha aseNingizimu Afrika lungatholakala lapha: Cape Town, Johannesburg, Tshwane, Ethekwini, Ekurhuleni, Nelson Mandela Bay, Buffalo City, Mangaung, Emfuleni, Polokwane, Msunduzi, Thulamela, Rustenburg, Bushbuckridge, Makhado, King Sabata Dalindyebo kanye neMatjhabeng.
Izidingo zeklayenti zemisebenzi yezokuhumusha zivame ukuba ngezibonisa izilimi ezikhulunywa kakhulu esifundeni salo eNingizimu Afrika.
Translation Johannesburg: IsiZulu & Sesotho
Translation Pretoria: Sepedi & Afrikaans
Translation Cape Town: IsiXhosa & Afrikaans
Clinical & Medical Translation